Baahin: Khamiis, Apr 26, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Wasaarada kalluumaysiga ee Puntland oo barnaamij horumarineed oo kalluumaysi ka fulinaysa Eyl; Duqa degmada Isku-shuban oo is-casilay; Xukuumada federaalka oo ka shirtay dastuurka qabyada ah ee dawlada federaalka; Warbixin ku saabsan safarka duqa magaalada Galkacyo ee wadamada Scandinavia. – Radio Daljir
Abriil 26, 2012 12:00 b 0
10 qof oo ku geeriyootay weerar lala beegsaday goob aflaamta lagu daawado Muqdisho